OEM Jeep Wrangler Laydhka hore, Jeep Wrangler Iftiiminta suuqa dambe - Morsun
Jeep Wrangler Iftiinka hore ee suuqa dambe
Maaddaama nalka hore ee LED-ku uu adeegsado tamar ka yar oo uu ka sii cimri dheeraado laambadihii dhaqameed halogen, si aad iyo aad u badan Jeep Wrangler milkiilayaashu waxay doorbidi lahaayeen inay ku beddelaan nalka keydka nalka hore ee laydhka. Sida mid ka mid ah hogaaminaya Jeep Wrangler hogaamiya nalka hore ee baabuurta, waxaan horumarinaa tiro balaadhan oo ah Jeep Wrangler nalalka hore ee suuqa dambe waayo, Jeep baabuurta offfroad cusboonaysiiyey, sida Jeep Wrangler JK, JL, TJ, LJ, Gladiator, iwm. Nalalka laydhka ee aynu hogaaminayno Jeep Wrangler Inta badan waxaa ka mid ah 9 inch nalalka laydhka ah iyo 7 inch nalka hore, oo loogu talagalay leh tayo sare leh chips LED horumarsan sida Cree iyo Osram, qaarkood ayaa la ansixiyay DOT SAE. Waxay la yimaadaan iftiin hooseeya oo hooseeya, DRL iyo ikhtiyaarrada calaamadaynta, 3-4 jeer dhalaal sare oo ka badan nalalka hore ee halogen oo leh ilaa 50000 saacadood nolosha, iftiinka iftiinka jilicsan iyo badbaadinta tamar badan. Ku xidh oo si fudud u ciyaar si loo rakibo, guryaynta aluminium ka-hortagga daxalka iyo heerka biyaha-ilaalinta IP67 si aad u hubiso in nalka hore uu ku habboon yahay nooc kasta oo deegaan ah.
1987-1995 Jeep Wrangler Iftiinka Wareega 5x7 Muraayadaha Muraayadaha YJ Led
5x7 Nalalka Iftiimmeedka Beam Mashruuca Jeep YJ Halo Nalalka Hore ee Fagaaraha Wrangler
H6054 Led Headlight 5x7 Shaabad Xiran oo H5054 H6054 Beddel Led Jeep xj Casriyayntii Beddelka Iftiinka Iftiinka